जनमतहरू – इन्सेक
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बेमौसमी वर्षाले निकै क्षति पुर्‍यायो । काटेर खेतमा राखेको र काट्न तयार भएको धानबालीमा क्षति पुर्‍यायो । बेमौसमी वर्षतका कारण किसानहरूलाई परेको समस्यामा जनप्रतिनिधिहरूले के कसरी सहयोग गर्ने योजना बनाएका छन् भन्ने विषयमा इन्सेक अनलाइनका लागि कैलाली जिल्ला प्रतिनिधि मैनामोति चौधरीले तयार पार्नु भएको जनमतः
प्रदिप चौधरी, अध्यक्ष, जानकी गाउँपालिका
बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढीले जानकी गाउँपालिकाको वडा नं. ९, ३ र ६ अति प्रभावित वडाहरूका १ सय १६ घरपरिवार विस्थापित भएकाले नजिकैको विद्यालयमा राखेर तत्कालका लागि वडा कार्यालयको समन्वयमा मेस सञ्चालन गरी खाना खुवाउने काम भइरहेको छ । विस्थापित परिवारलाई जानकी गाउँपालिका र रेडक्रसको सहयोगमा कम्बल, त्रिपाल तथा स्वास्थ्य सामग्री वितरण भइरहेको छ । तुरुन्त कार्यपालिकाको बैठक बसी विस्थापित परिवारको सङ्ख्या अनुसार एक महिनाका लागि खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने र विस्थापितहरू घर फर्किएपछि भौतिक संरचनाको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी सोही अनुसार घर निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेर योजना अनुसार धानबालीको विवरण सङ्कलन गरी सर्वदलीय बैठकबाट पास गराई प्रदेश सरकारसँग सहयोगको लागि समन्वय गर्ने योजना रहेको छ ।
लाजुराम चौधरी,अध्यक्ष, कैलारी गाउँपालिका
कात्तिक ३ गते गाउँपालिकाको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक बसी विकासको बजेट कटौती गरी भोकमारीको समस्या आउन नदिन ३ करोड रुपियाँको खाद्य बैङ्क स्थापना गर्ने, धानबालीको क्षति अनुसार प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउने, गाउँपालिकामा रहेको सबैभन्दा बढी बाढी प्रभावित वडालाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्ने र किसानलाई हिउँदे खेतीको लागि गाउँपालिकाबाट अनुदानमा बिउविजन (गहुँ, तोरी, मसुरो, आलु) आदि तथा मलखाद उपलब्ध गराउने निर्णय गरी योजना बनाएर काम अगाडि बढाइएको छ ।
तपेन्द्र रावल, प्रमुख, टिकापुर नगरपालिका
टिकापुर नगरपालिकास्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट नगरपालिकामा सहयोग गर्ने सबै सङ्घसंस्थाहरूसँग समन्वय गरी एकद्वार प्रणाली अनुसार बेमौसमी वर्षातका कारण किसानलाई पर्न गएको नोक्सानीको तथ्याङ्कको आधारमा राहत उपलब्ध गराउन, टिकापुर नगरपालिकाले प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी किसानलाई हिउँदे बालीको लागि मलखाद तथा बिउबिजन अनुदानमा उपलब्ध गराउन र किसानहरूको भौतिक संरचनाको क्षति अनुसार घर निर्माण गर्न रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । साथै, नगरपालिकाको बैठकबाट अनुमोदन गरी राहत वितरण प्रकृया अगाडि बढाइएको छ ।
नेपालु चौधरी, सदस्य, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा तथा अध्यक्ष, विधायन सभा समिति
२०७८ असोज ३१ गतेदेखि कात्तिक २ गतेसम्म परेको वर्षका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामा बाढी पहिरोले धेरै धनजनको क्षति भएका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ ओटै जिल्लाका लागि प्रदेश सरकारले २५/२५ लाखका दरले विपद व्यवस्थापनका लागि राहत कोष स्थापना गरेको छ । विपद प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरी क्षतिको विवरण प्रतिवेदन र स्थानीय तहको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकारलाई बुझाएर तत्काल राहतको व्यवस्थापन तथा किसानको समस्या सम्बोधनका निम्ति पहल गर्ने योजना बनाएका छौँ ।
नारदमुनि राना, सदस्य, प्रतिनिधि सभा
२०७८ असोज ३१ गतेदेखि कात्तिक २ गतेसम्म परेको वर्षातका कारण कैलाली जिल्लालगायत सुदूर पश्चिमका नौ ओटै जिल्लामा बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपदले ठुलो धनजनको क्षति भएको अवस्थामा प्रदेश र सङ्घीय सरकारले मानवीय क्षति भएकाहरूलाई अविलम्ब राहत उपलब्ध गराइनु पर्छ । भौतिक क्षति भएकाहरूको घर अविलम्ब निर्माण गरी विस्थापित परिवारलाई पुनर्स्थापित गर्नुका साथै पहिरोमा परी बेपत्ता भएकाहरूको खोजी गरी उचित राहतको व्यवस्था गर्नु पर्ने र किसानहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न तथा खेतमा कुहिएको धानलाई सरकारले तोकेको समर्थन मुल्यमा खरिद गरी हिउँदे बाली (गहुँ, मसुरो, आलु तोरी) लगायतको बिउ अनुदानमा उपलब्ध गराइनु पर्दछ । यसका लागि मेरो व्यक्तिगत पहलकदमी अवश्य पनि रहने नै छ ।
सुर्यबहादुर थापा, सभापति, जिल्ला समन्वय समिति
जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत जिल्लास्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण सबै स्थानीयबाट आइनसकेका कारण तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने क्रम जारी रहेकाले पुर्ण रुपमा क्षतिको विवरण आइसकेपछि सोही अनुसार पीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने र आगामी दिनमा विपदलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति विपद व्यवस्थापनलाई मुख्य मुद्दा बनाएर पूर्व तयारी योजना निर्माण गरी गतिविधि अगाडि बढाउने योजना रहेको छ ।
शेरबहादुर चौधरी, प्रमुख, भजनी नगरपालिका
बेमौसमी वर्षातका कारण भजनी नगरपालिकामा रहेका सबै वडाका नागरिकहरूको धानबाली तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको अवस्थामा रेडक्रससँगको सहयोगमा तत्काल उद्धार गरी नजिकैको विद्यालतमा राखेर राहत, त्रिपाल उपलब्ध गराएका छौँ । नगरकार्यपालिकाको बैठक बसेर घर भत्केकाहरूको क्षतिको (पुर्ण र आंशिक) विवरण अनुसार घर निर्माण खर्च र धानबालीको क्षति अनुसार किसानहरूलाई राहत प्याकेजका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, हिउँदे बालीका लागि मलखाद र बिउबिजन सहुलियतमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौँ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा अविरल वर्षाले कारण काटेर खेतमा राखेको र काट्न तयार भएको धानबालीमा क्षति पुर्‍यायो । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बर्दिया जिल्लामा क्षति भएको छ । कतिपय किसानहरूले घर भित्र राखेको अन्नसमेत नष्ट गर्‍यो । बेमौसमी वर्षतका कारण किसानहरूलाई परेको समस्यामा जनप्रतिनिधिहरूले के कसरी सहयोग गरेका छन् र राहत, क्षतिपूर्तिका साथै आगामी दिनमा यस्ता समस्याबाट जोगिन के कस्ता योजनाहरू बनाएका छन् भन्ने विषयमा इन्सेक अनलाइनका लागि बर्दिया जिल्ला प्रतिनिधि मानबहादुर चौधरीले तयार पार्नु भएको जनमतः
मेयर, शिवप्रसाद चौधरी
राजापुरमा ८ हजार हेक्टरमा धान बाली हुने गरेको छ । तीन दिन परेको पानी र कर्णाली नदीको बाढी पसेर १ हजार ६ सय बिगाहामा काटेको धान बगाएको छ । अहिले खेतमा पानी सुक्दै गएको भएपनि खेतमा रहेको धान उम्रेको छ । क्षतिको पूर्ण विवरण आउन अझै समय लाग्छ । बाढीका कारण राजापुर नगरपालिका–१ मा ७ सय ४८, वडा नं ३ मा १ सय २० र वडा नं ७ मा एक सय ५९ घरधुरी गरी जम्मा १ हजार २७ घरधुरी डुबानमा परेका छन् । घर डुबानमा परी विस्थापित भएका परिवारलाई खाद्यन्नलगायत अति आवश्यक वस्तुहरू उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ । रोगको सङ्क्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । पानी सुक्न थालेकाले अहिले अधिकांश बाढी पीडित परिवार घरमा फर्कदै हुनुहुन्छ । तर, बाढीले घर र खेतको धान क्षति भएका कारण खाद्यान्नको अभाव देखिन थालेको छ । वर्तमान अवस्थामा बाढी पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न नगरपालिकाको आन्तरिक बजेटले धान्न सक्ने अवस्था छैन । पीडितहरूलाई खाद्यान्नको सवालमा दिर्घकालिन रुपमा समस्या सम्बोधन गर्न पीडित किसानहरूलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारले विशेष निर्णय गरी व्यवस्था गर्न माग गरेका छौँ । प्रदेश र सङ्घीय सरकारले कस्तो किसिमको कार्यक्रम ल्याउँछ । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै पीडित किसानहरूको वर्गीकरण गरी वस्तुस्थिति विश्लेषण गरी सोही अनुसार योजना बनाउछौँ र नगरपालिकाबाट पनि विशेष राहतको कार्यक्रम बनाएर कार्यान्यन गर्छौँ ।
मेयर, शालिकराम अधिकारी
बाँसगढी नगरपालिकामा करिब ३० हजार कट्ठा जमीनमा लगाएको धान बाली क्षति भएको छ । पूर्ण क्षतिको तथ्याङ्क लिन सुरु गरिएको छ । बेमौसमी वर्षातका कारण ५ हजार किसान प्रभावित भएका छन् । किसानहरूलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारले विशेष निर्णय गरी व्यवस्था गर्न माग गरेका छौँ । प्रदेश र सङ्घीय सरकारले कस्तो किसिमको कार्यक्रम ल्याउँछ । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै पीडित किसानहरूको वर्गीकरण गरी योजना बनाउने र नगरपालिकाबाट पनि विशेष राहतको कार्यक्रम लागु गर्छौँ ।
लुम्बिनी प्रदेश सांसद
बर्दियाको क्षेत्र नं. २ (ख) मेरो क्षेत्र हो । बेमौसमी वर्षातका कारण लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जिल्ला सबै भन्दा बढी प्रभावित भयो । बर्दिया जिल्लामा पनि बर्दियाको क्षेत्र नं. २ (ख) को राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका प्रभावित भयो । कर्णाली नदीको दुवै भङ्गालो बिचमा रहेको सो क्षेत्र नदीको पानी पसेर काटिसकेको सयौँ बिगाहाको धान बगायो । पाकिसकेको धान डुबेका कारण उम्रेर क्षति भएको छ । प्रदेश सरकारले तत्कालै पीडित किसानहरूलाई भोकमरी हुन नदिन र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन पाँच जना सदस्य सङ्ख्या भएका प्रति परिवारलाई ५० हजार रुपियाँसम्म रकम उपलब्ध गराउन पहल गरेको थिएँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सोको निर्णय गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैँ आएर बाढीले क्षति पुर्‍याएको क्षेत्रको बारेमा अनुगमन गर्नु भएकाले सङ्घीय सरकारले छुट्टै विशेष कार्यक्रम ल्याउला भन्ने आशा गरेको छु । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मासँग भेटघाट गरी बर्दिया जिल्लालाई छुट्टै कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छु । कर्णाली नदीले राजापुर क्षेत्रको राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपलिकामा हरेक वर्ष बाढीले क्षती पुर्‍याउँदै आएको छ । यस वर्ष नसोचेको समयमा वर्षा भयो । तयार भइसकेको धानबाली खेतमै डुबाएर नष्ट बनायो । यो सबै कर्णाली नदीमा भरपर्दो तटबन्ध बनाउन नसक्नुका कारणले भएको हो । यसअघि नै मैले अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मालाई सो क्षेत्रको अवस्था जानकारी गराउँदै ड्याम निमार्णका लागि १ अरब रुपियाँ बराबरको बजेट छ्ट्याएर निकासा पठाउन पहल गरेको थिएँ । कर्णाली नदीमा बलियो ड्याम तत्काल बनाउनु पर्छ भन्ने प्रमणित भएको छ । कर्णालीमा बलियो ड्याम्प निर्माण गर्न सक्यो भने कुनै पनि बेला अविरल वर्षाको कारण बाढी आएर पुर्‍याउन सक्ने जन धन र खाद्यन्नको क्षति हुनबाट बच्न बचाउन सकिन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । मेरो प्रयास यसैमा केन्द्रीत हुने छ ।
संयोजक, शङ्करप्रसाद चौधरी
जिल्ला समन्वय समिति, बर्दिया
बेमौसमी वर्षाको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियामा पनि पर्‍यो । बर्दियामा सबैभन्दा बढी राजापुर क्षेत्रको राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकामा परेको छ । त्यसो त अन्य स्थानीय तहमा पनि परेको छ । धानबाली नै जिल्लाको मुख्य आय स्रोतको रुपमा किसानहरूले अँगालेका छन् । किसानहरूले वर्ष भरीको आम्दानी गुमाएका छन् । अति विपन्न किसानहरू, अरूको खेत अँधियामा लगाएर वर्ष भरीको खाद्यान्न जोहो गर्ने किसानहरूलाई खाद्यान्न सङ्कट भइ भोकमरी पर्ने देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष अनुगमन गरेको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बोलाउन लगाएर सम्बन्धित निकाय र अन्य सहयोगी निकायहरूसँग समस्या समाधानका लागि योजना बनाएर तत्काल राहत र सकेसम्म क्षतिपूर्तिका लागि पहल गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको आफ्नै छुट्टै कुनै कार्यक्रम हुँदैन । यसको भूमिका जहिले पनि समन्वय र पहलकदमीको भूमिका रहने गरेको छ । यस भूमिकालाई शसक्त रूपमा कुनै कसर नराखी निर्वाह गरिरहेका छौँ । सबै तहका सरकारसँग बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको बारेमा पूर्ण विवरण लिन झक्झक्याइ रहेका छौँ । अनुगमनको क्रममा तत्कालै गरिहाल्न पर्ने अति आवश्यक कामलाई पनि पुरा गर्न सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गरेका छौँ ।
अध्यक्ष, जमानसिहं केसी
गेरुवा गाउँपालिकामा बेमौसमी वर्षाका कारण २ सय ५० घर डुबानमा परे । डुबानबाट अन्नपात लत्ताकपडालगायत घरायसी सामानहरू बगाएको छ । उनीहरूलाई गाउँपालिकाको आन्तरिक कोष र विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहयोगमा राहत सहयोग गरिरहेका छौँ । घर र धानबालीको क्षति विवरण लिन सुरू गरेकोमा अन्तिम चरणमा रहेका छौँ । प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार सयौँ बिगाहा खेतमा घर भित्र्याउन काटिसकेको धान कर्णाली नदीको बाढी पसेर बगाएको छ । खाद्यान्न सङ्कट हुनसक्ने अति विपन्न परिवारको पहिचान भइरहेको छ । यसका लागि गाउँपालिकाले निर्णय गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैँ आएर हेर्नु भएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले पनि अनुगमन गरेर अश्वासन दिनु भएको छ । तर, निर्णय भएर राहत क्षतिपूर्ति नआउँदासम्म विश्वास गर्ने कुरा पनि भएन । गेरुवा गाउँपालिकाले यहाँका जनतालाई परेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न र पहलकदमी गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैन ।
संघीय संसद, सन्तकुमार थारु
बर्दिया क्षेत्र नं. २
बेमौसमी वर्षातको कारण भएको डुबानले गरेको क्षतिको बारेमा म आफैँ जनताको घर खेतमा गएर अनुगमन गरेको छु । सारै पीडादायी अवस्था छ । यो समयमा यसरी पानी पर्ला र खाद्यान्न क्षति गर्ला भन्ने कुरा कल्पना नै नगरिएको कुरा हो । कृषिमा निर्भर किसानहरू मर्कामा परेका छन् । घरमा अलि अलि भएको खाद्यान्न पनि भिजाएको छ । खेतमा काटेको र पाकेको धान बगाउनुको साथै डुबाएर अहिले सबै उम्रेको छ । यसले उनीहरूलाई तत्कालै साँझ बिहान खानलाई पनि समस्या पर्न थालिसकेको छ । सरकार र सङ्घसंस्थाहरूले राहत बाँडिरहेका छन् । तर, त्यो दिर्घकालिन रूपमा हुन सक्दैन । यसलाई दिर्घकालिन रुपमा सोच्नु पर्छ । यसै सन्दर्भमा मैले जिल्लामा स्थानीय सरकार, जिल्ला दैविक प्रकोप व्यवस्थापन समिति, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यालयलगायतका कार्यलयसँग कुरा गरेको छु । केन्द्रमा कृषि मन्त्रालयको मन्त्रीसँग जिल्लामा खाद्यान्न सङ्कट पर्ने भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न ‘विशेष प्याकेज कार्यक्रम’ तत्कालन ल्याउन पहल गरिरहेको छु । उर्जा तथा जल स्रोत मन्त्रालयमा आगामी दिनमा बाढीले नागरिकहरूले बाढी आएर जनधनको क्षति हुनबाट त्रासमा बस्न नपरोस भन्ने दिर्घकालिन रुपमा समस्या समाधन गर्न कर्णालीलगायत अन्य नदीहरूमा पनि ड्याम बनाउन तत्काल छोटो समयमा ठेक्का आह्वान गरी काम सुरू गर्न पहल गरी रहेको छु । साथै ती काम गर्न अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीसँग भेटेर आवश्यक बजेट छुट्याएर निकासाका लागि पनि पहलकदमी गरिरहेको छु । बर्दियावासीले बाढीको कारण मानवीय तथा खाद्यान्न समस्याबाट मुक्ति दिलाउन गर्न पर्ने आवश्यक सबै कार्यका लागि जनप्रतिनिधिका जिम्मेवारी पुरा गर्न कुनै कसर राख्दिनँ ।
मेयर, दुर्गाबहादुर थारू
बारबर्दिया नगरपलिका, बर्दिया
बेमौसमी वर्षातको कारण भएको डुबानले बारबर्दिया नगरपालिकामा २ सय हेक्टर जमीनमा किसानले काटिसकेको धान डुबानमा परी उम्रेर पूर्ण रूपमा क्षति भएको र नकाटेको धान पनि आंशिक रूपमा क्षति भएको छ । क्षतिका विवरण लिने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विपन्न किसानहरूलाई खाद्य सङ्कट हुने देखिएको छ । विपन्न किसानहरूलाई हुन सक्ने खाद्य सङ्कटलाई ध्यानमा राखी विशेष निर्णय गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढउने छौँ । अन्य किसानहरूको क्षतिको विवरण अनुसार प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्ने तयारीमा छौँ ।
विद्यालय तहमा मानव अधिकार शिक्षालाई लागु गर्नु पर्छ
जनताका प्रतिनिधिद्वारा २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा नागरिकका दायित्यलाई पनि लेखिएको छ । यही संविधानले तीन तहका सरकारको शासकीय स्वरूप अबलम्बन गरेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक उपभोगका लागि स्थानीय सरकारले के गर्नु पर्छ ? प्रस्तुत छः इन्सेक बैतडी प्रतिनिधि नरी बडुले जिल्लाका सरोकारवालासँग सोधेर तयार पार्नु भएको जनमत
मोहन चन्द, संयोजक, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, बैतडी
व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित अधिकारको प्रत्याभूत गर्ने सबै भन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । तर, स्थानीय सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि जति काम गर्नु पर्ने हो र नागरिकले उपभोग गर्न पाउनु पर्ने हो सो को उपभोग गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय सरकारले मौलिक हकको उपभोग गर्नको लागि स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सृजना गर्नु पर्छ । त्यसका लागि उद्योग कलकारखाना खोल्नु पर्छ । स्वास्थ्य तथा सञ्चारका पुर्वाधारको विकास गर्नु पर्छ । स्वच्छ वातावरणको लागि वनजङ्गल जोगाउनतर्फ ध्यान दिनु पर्छ । ठाउँठाउँमा विद्यालयको स्थापना गर्नु पर्छ । समयसयममा बजारको अनुगमन गरेर स्वच्छ खानेकुरा र उपभोग्य सामानको गुणस्तरको जाँच गर्नु पर्छ । छुवाछुत गर्नेलाई कडा कारवाही गर्नु पर्छ । स्थानीय सरकारले नागरिकको गुनासो सुन्ने र त्यसको सम्बोधन गर्ने कार्य गर्नु पर्छ । महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नगरिकको हक सुरक्षित गर्नका लागि स्थानीय सरकार अग्रसर हुन आवश्यक छ । त्यसपछि मात्रै नागरिकले मौलिक हकको उपभोग गरेको महसुस गर्छन् ।
गोविन्दराज जोशी, अध्यक्ष, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, बैतडी
जातीय विभेद तथा छुवाछूत जस्ता संवेदनशील घटनामा संलग्न दोषीलाई संरक्षण गर्ने कार्य रोकिनु पर्छ । यस्ता प्रकारका घटनालाई निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानमार्फत दोषीलाई कानुनी कारवाही तथा पीडितलाई क्षतिपुर्तिसहित न्याय दिन सक्नु पर्छ । स्थानीय नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उनीहरुको प्रविधिमा पहुँच छैन । स्थानीयले आवश्यक सूचना तत्काल रूपमा पाउनका लागि स्थानीय तहले त्यस प्रकारका कार्यक्रम तय गरेर कार्यान्वयमा ल्याउनु पर्छ । संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका नागरिकका अधिकारको प्रत्यभूति गराउन स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नु पर्छ । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको संरक्षण तथा सम्मान गर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकाले मानव अधिकारको सम्मान गर्दै नागरिकका अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ । आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदाय र व्यक्तिको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।
निर्मला टेर, सह–सचिव, मानव अधिकार समूह, बैतडी
स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापनका लागि मौलिक हक नागरिकको लागि नभइ नहुने अधिकार हो । मौलिक हक नेपालको कानुन अनुसार आम नागरिकको लागि समान, सर्वपक्षीय र प्रभावकारी हुनु पर्दछ । तर, समानताले मात्रै सम्पूर्ण नागरिकको गुणस्तर जीवन मापन गर्न सकिँदैन । अझै पनि गरिबीको रेखामूनि रहेको सङ्ख्या धनीको तुलनामा धेरै छ । यसको लागि स्थानीय तहले समताको अवधारणा ल्याउनु आवश्यक छ । अझै पनि धेरै जसो नागरिकलाई मौलिक अधिकारको बारेमा जानकारी नहुँदा र सेवा प्रवाह गर्ने निकाय जिम्मेवार नहुँदा मौलिक हकको उपयोग गर्नबाट स्थानीय नागरिक वञ्चित छन् । यसका लागि स्थानीय सरकारले उचित नीति नियम बनाएर प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न आम नागरिकलाई सचेत पार्दै नेपाल सरकारले तोकेका सेवा सुविधाको सहि सूचना प्रवाह गरी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनु आवश्यक छ । यसका साथसाथै गरिबीको रेखामूनि रहेका नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सहुलियतपूर्ण तरिकाले रकम लगानी गरी आत्मनिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । भौगोलिक विकटतालाई मध्यनजर गरी आधारभूत सेवा सुविधा सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउनु पर्दछ । नागरिकको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास र रोजगारी जस्ता आधारभूत पक्षहरुमा दिगो लगानी गरेर नागरिकको जीवनस्तरलाई सबल र सुगम बनाउने कार्यमा स्थानीय सरकार सधैँ जिम्मेवार रहेर सर्वपक्षीय सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी स्वार्थपूर्ण राजनीति भन्दा माथि उठेर जनताको सेवामा तत्पर रहनु पर्दछ ।
प्रेम भाट, अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, बैतडी
मानव अधिकार संरक्षणका लागि सरकारले उचित नीतिनियम बनाएर प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न र आम नागरिकलाई सचेत पार्न जरूरी छ । गाउँगाउँमा मानव अधिकार शिक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । विद्यालय तहमा पनि मानव अधिकार शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न आवश्यक छ । नेपाल सरकारले तोकेका सेवा सुविधाको सहि सूचना प्रवाह गरी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनु आवश्यक छ । यसका साथसाथै गरिबीको रेखामूनि रहेका नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सहुलियतपूर्ण रकम लगानी गरी आत्मनिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । भौगोलिक विकटतालाई मध्यनजर गरी आधारभूत सेवा सुविधा सम्बन्धित ठाँउमा नै सञ्चालन गर्नु पर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता आधारभूत विषयमा नागरिकको पहुँच सहज एवम् सुलभ बनाउन जरूरी छ ।
मिना चन्द, उपप्रमुख, दशरथचन्द नगरपालिका
संविधानमा लिखित मौलिक हकको कार्यान्वयन मात्रै पूर्ण रूपमा गर्न सक्यो भने नागरिकको जीवनस्तर माथि उठ्ने कुरामा दुईमत छैन । अहिले सबै स्थानीय तहले मौलिक हकको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । यद्यपी यसमा लागिपरेका छन् । विषेश गरी नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवासका हकमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । आर्थिक अभावबाट विभिन्न तरिकाले पछाडि पारिएका वर्गको उत्थानका लागि स्थानीय सरकारले उचित भुमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । समाजमा हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । स्थानीय तहले पनि शसक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक हुन्छ ।
प्रस्तुतीः नरी बडु/बैतडी
पीडितलाई न्याय दिने कुरामा स्थानीय सरकार अग्रपङ्क्तिमा हुनुपर्छ
लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धताः व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ यही नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर मनाइरहँदा नेपालमा पनि यो अभियान सञ्चालित छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ३० ले महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमका हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नपाइने कुरा उल्लेख गरेको छ । महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा नियन्त्रण कसुर सजाय ऐन २०६६ जारी भई लागु भएको छ । लिङ्गका आधारमा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा र हत्याका घटनामा बृद्धि हुँदै आएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएका छन् । यसै परिवेशमा हामीले केही स्थानीय तहका उपप्रमुखसँग लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरका लागि तपाईँको स्थानीय तहले केकस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भनेर सोधेका छौँ । प्रस्तुत छ उहाँहरूको भनाइ जस्ताको तस्तैः
उपप्रमुख, रतुवामाई नगरपालिका, मोरङ (प्रदेश–१)
लैङ्गिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियानमा रतुवामाई नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि समाजमा सचेतनाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले हाम्रो नगरपालिकाले स्थानीय एफएम रेडियोसँग सहकार्य गरी लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि सचेतनामुलक कार्यक्रम निर्माण गरी प्रशासरण गरेको छ । छोटोछोटो सन्देशमुलक साम्रगी निर्माण गरी प्रशारण गरिरहेको छ । कोभिडको महामारी भएकाले भिडभाड हुने गरी कार्यक्रम आयोजना गरिएको छैन । एक गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा रतुवामाई नगरपालिकाका वडा–८ र ४ मा महिला स्वास्थ्य र परामर्श मेलाको आयोजना मङ्सिर १४ गते गरिएको छ । भौगोलिक हिसाबले रतुवामाई नगरपालिका भारतीय सिमावर्ती क्षेत्रमा जोडिएको र आदिवासी समुदायको बाहुल्यता भएको दक्षिणी क्षेत्रलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य मेलाको आयोजना गरिएको थियो । मेलामा गुप्त रोग र सामाजिक सचेतनाका कारण अधिकांश आदीवासी महिलाहरूले लुकाउने रोगको निदान तथा परामर्श दिने कार्य गरिएको छ । अभियान सुरूआत भएको दिन मङ्सिर १० गते नगरपालिका हाताभित्र लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण अन्त्यमा लागि पर्चा वितरण गरिएको छ । अभियान समापन हुने दिन सबै जनप्रतिनिधिलाई लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि आफ्नो वडामा आगामी वर्षभित्र सम्पादन गरिने कार्य र योजना माग गरिने साथै जनप्रतिनिधिहरूबाट सामूहिक प्रतिबद्धता लिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
उपप्रमुख, मन्थली नगरपालिका, रामेछाप (बागमती प्रदेश)
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानमा पनि हामीले नगरपालिकाका वडावडामा साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यसले नागरिकलाई सचेत बनाउने काम गरेको छ । हामीले यसलाई यही १६ दिन मात्र नभएर वर्षैभर महिला माथि हुने हिंसा विरुद्धका कार्यक्रम र अभियान सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, मन्थली नगरपालिकालाई सबैखालका हिंसामुक्त नगरपालिका बनाउने हाम्रो लक्ष छ । तथापि हिंसाका घटना बारम्बार सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यसलाई न्युनीकरण गर्नका लागि न्यायिक समितिमार्फत पनि विभिन्न सचेतनाका काम भएका छन् । त्यस्तै पीडितलाई न्याय दिने कुरामा पनि हामी लागि रहेका छौँ । मन्थली नगरपालिका जिल्लाको सदरमुकाम पनि हो । त्यसैले पनि यहाँ गरिने क्रियाकलाप नगरपालिकाको लागि मात्र नभएर जिल्ला भरिकै नागरिकलाई समेट्ने गरी केन्द्रीत हुनु पर्दछ । हामीले सोही अनुसार काम गरिरहेका छौँ ।
यस बाहेक हिंसा पीडितलाई संरक्षणको लागि नगरपालिकाले संरक्षण तथा स्यहारा केन्द्र समेत स्थापना गरी उनीहरूलाई न्यायिक प्रक्रियामा जान समेत सहजिकरण गर्ने गरेको छ । मन्थली नगरपालिकाको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाले पनि लैङ्गिक सचेतिकरणका विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । त्यसैगरी प्रहरीसँग मिलेर पनि हामीले विभिन सचेतनाका काम गरेका छौँ । कसैले पनि हिंसा सहेर बस्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मन्यता रहेको छ । त्यसैले नागरिकलाई हिंसा के हो ? कसरी हुन्छ ? हिंसा भयो भने के गर्ने ? कहाँ जाने ? कानुनी उपचार कसरी पाइन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले सचेतिकरण कार्यक्रम गर्ने गरेका छौँ ।
उपप्रमुख, पोखरा महानगरपालिका, कास्की (गण्डकी प्रदेश)
लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि १६ दिन मात्रै अभियान गरेर हुँदैन । जबसम्म हिंसाको अन्त्य हुँदैन तबसम्म अभियान जारी राख्नुपर्छ भनी गएको वर्षबाट कार्यक्रम बनाएर लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध पुरुषको ऐक्यबद्धता सचेतना कार्यक्रम भनेर सबै (३३ ओटै) वडामा कार्यक्रम सुरू गरेका थियौँ । कोभिड–१९ का कारण सबै वडामा कार्यक्रम गर्न सकेनौँ । पुरुष र महिलाको समान सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा कार्यक्रमलाई यस वर्षपनि निरन्तरता दिएका छौँ । बजेट छुट्याएका छौँ । वडावडाका महिला जनप्रतिनिधिको अग्रसरतामा वर्षभरि नै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । महिला जनप्रतिनिधिले त्यहाँका स्थानीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर आमा समूह, टोल विकाससंस्था लगायतको सहभागितामा सचेतना कार्यक्रम गर्नुहुन्छ । वडाका महिला प्रतिनिधिले माग गर्नुभयो भने उक्त वडामा महिला लक्षित सचेतना कार्यक्रम, उद्यमशिल र अधिकारका बारेमा छलफल गराउने कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ । यस्ता कार्यक्रमले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिएका छौँ ।
उपप्रमुख, शिवराज नगरपालिका, कपिलवस्तु (लुम्बिनी प्रदेश)
शिवराज नगरपालिकाले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहका सम्पुर्ण वडाहरूमा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ । प्रत्येक वडामा बहस, संवाद, अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिनुका साथै लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि सचेतना मूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । स्थानीय रेडियोबाट जिङ्गल प्रशारण गरी स्थानीय नागरिकहरूकलाई सचेत गराउने कार्य समेत गरेको छ । लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानमा मात्रै हामी केन्द्रित छैनौँ । ३ सय ६५ दिनलाई नै स्थानीयतहले अभियानको रुपमा लिएको छ । महिला तथा बालबालिकाहरु १६ दिने अभियानमा मात्र हिंसामा परेका छैनन् । न्यायिक समितिबाहेक हाम्रो स्थानीयतहमा हिंसा पीडीत महिलाहरूका लागि कुनै नीति निर्माण बनेको छैन । लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष खडा गरी विपन्न र असक्त पीडितहरूलाई सहयोगका लागि ३ लाख ५० हजार रुपियाँ कोषमा राखिएको छ ।
लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरण गर्नका लागि एक जनाले मात्र अभियान चलाएर मात्र सार्थकता नहुने भएको हुँदा सरोकारवालाहरूको साथ सहयोगको आवश्यकता महत्वपुर्ण देखिन्छ । हाम्रो स्थानीय तहमा सबैको साथ र सहयोग भइरहेको छ । यसरी सबै एकजुट हुन सके न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । बालिका र महिलामाथि भएका बलात्कारका घटनालाई कसैले पनि लुकाएर राख्नु हुँदैन । नगर भित्रका महिला तथा बालबालिकाहरू जुनसुकै हिंसामा परेको भए पनि पीडितले न्याय पाउनु पर्छ । यसमा जनप्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी, विभिन्न सङ्घसंस्था र सञ्चार माध्यमबाट पीडितको पक्षमा आवाज आउन आवश्यक छ ।
प्रेमकुमारी सुनार केसी
उपप्रमुख, मुसिकोट नगरपालिका, रुकुम पश्चिम (कर्णाली)
सामाजिक लिङ्गभेदको आधारमा गरिने सम्पूर्ण कार्यहरू जस्तैः कुटपिट गर्ने, डर त्रास देखनउने, धम्की दिने, ओहोदाको दुरूपयोग गरी व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनमा आघात पुर्‍याई व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन् गरिन्छ भने त्यो नै लैङ्गिक हिंसा हो । लिङ्ग विशेषको आधारमा गरिने शोषण दमन र दुव्र्यवहार हो । लैङ्गिक हिंसाका रूप विभिन्न देश, समाज र संस्कृति अनुसार फरकफरक रहेका छन् । हाम्रो नगरपालिका पनि यस विषयबाट अछुतो रहन सकेको छैन । बाल विवाह, कथित बोक्सीको आरोप, मदिरा सेवन, समान कामको लागि असमान ज्याला, गरीवी, सूचना प्रविधिको दुरूपयोग, पद र प्रतिष्ठाको दुरूपयोग र पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाका कारण लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू हुने गरेका छन् । विगत वर्षहरूदेखि नगरपालिकाले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरी विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूको साझेदारीमा सचेतनामुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । जस्तो हिंसामा परेका महिलाहरूलाई तत्काल सुरक्षित बस्नको लागि मुसिकोट नगरपालिका खलङ्गामा रहेको सेफ हाउस सञ्चालनमा आर्थिक सहयोग गरेका छौँ ।
अन्यायमा परेका अति विपन्न महिलालाई न्याय प्राप्तिका लागि आर्थिक सहायता, नगरपालिकाको वडा स्तरमा विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा बाल विवाहविरूद्ध सडक नाटक तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियानका कार्यक्रम सञ्चालन, महिलाको आय आर्जन तथा क्षमता विकासका लागि विभिन्न सीप विकास तथा क्षमता विकास तालिमहरू सञ्चालन, हिंसा पीडित व्यक्ति तथा अन्य व्यक्तिलाई उजुरी गर्न सहजताका लागि टोल फ्री नं. सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । हिंसा रहित समाजको परिकल्पना गर्न हामी कसैलाई हिंसा गर्दैनौँ, गर्न दिदैनौँ भनी घर परिवार, समाज र राज्य पक्षबाट प्रण गरौँ, हिंसा पीडित परिवारको सदस्य नबनौँ र नबनाऔँ जस्ता प्रतिबद्धता सहित लैङ्गिक हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियान, नारी दिवस तथा मानव अधिकार दिवसको अवसर पारेर विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरी लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।
उपप्रमुख, गोदावरी नगरपालिका, कैलाली (सुदूरपश्चिम प्रदेश)
लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि गोदावरी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमार्फत गोदावरी नगररपालिकामा रहेका सबै सरोकारवालाहरूसँग “लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धताः व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता” भन्ने मुल नाराका साथ मनाइरहेका छौँ । लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरणका लागि नगरपालिकाले मङ्सिर १७ गते सबै सरोकारवालाहरूसँग संयुक्तरुपमा नगरिकस्तरीय अन्तरक्रिया गर्ने, प्रत्येक वडाले पालैपालो वडा स्तरीय जनचेतना मुलक कार्यक्रमको आयोजना, निर्णय भएकाले सोही अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । वडास्तरीय कार्यक्रमपछि प्रत्येक वडाका हिंसा पीडितहरूसँग नगर भेलाको आयोजना गर्नेछौँ । त्यसै भेलामा अतिविपन्न लैङ्गिक हिंसा पीडित महिलाहरूलाई सहयोग तथा हिंसा पीडित बालबालिकाहरुलाई स्टेशनरीका सामग्री र अन्य सहयोगको कार्याक्रम रहेको छ ।
गोदावरी नगरपालिकालाई लैङ्गिक हिंसामुक्त बनाउने नीति तथा कार्यक्रम रहेकाले लैङ्गिक हिंसा मुक्त नगर बनाउने अभियानको सुरुवात पनि यसै १६ दिने अभियानबाट सुरू गरिसकेको छौँ । आउने कार्यपालिकाको बैठकमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कार्यविधि पास गर्ने तयारीमा छौँ । न्यायिक समितिले लैङ्गिक हिंसा पीडितहरूलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
(प्रस्तुतीः प्रदेश १–पुण्य अधिकारी, बागमती प्रदेश–नवराज घिमिरे, गण्डकी प्रदेश–सुशन घिमिरे, लुम्बिनी प्रदेश–पार्वती आचार्य, कर्णाली-मनिषा केसी, सुदूरपश्चिम प्रदेश–मैनामोती चौधरी)